Oovimba abagciniweyo be-FTSE 100
I-FTSE 100 (UKX) ijongene nokuGatywa kwiNqanaba le-7400, i-May Slide ukuya kwiNqanaba 7242 Low
I-FTSE 100 (UKX) ikwinqanaba eliphezulu. Isalathiso sinyukele phezulu kwinqanaba le-7400. Kwiveki edlulileyo, isalathisi siye sawa njengoko abathengi behluleka ukugcina ixabiso ngaphezu kwamva nje. Imarike iwile kodwa ingaphezulu komgca weentsuku ezingama-21 ezihambayo. Uxinzelelo lokuthengisa luya kuphelisa ukuba ii-avareji ezihambayo zeentsuku ezingama-21 zibambe. Uxinzelelo lokuthengisa luya kuqhubeka ukuba ixabiso liphuka ngaphantsi kwee-avareji ezihambayo.
Isalathiso siwele kwinqanaba le-54 ye-Relative Strength Index ixesha le-14. Ibonisa ukuba ikwindawo ye-uptrend nangona i-retracement. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka phezulu zibonisa ukonyuka. Ixabiso le-crypto lisengaphezulu kwee-avareji ezihambayo ngaphandle kokuphinda kukhangelwe nto leyo ebonisa ukunyuka okunokwenzeka.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-FTSE 100 ikwintshukumo ezantsi. NgoNovemba 11 uptrend, abathengi abakwazanga ukugcina isantya se-bullish ngaphezu kwezinga le-7400. Ngenxa yoko, uxinzelelo lokuthengisa luqala phantsi. Okwangoku, ngoNovemba 15 downtrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-50% yenqanaba lokubuyisela iFibonacci. Ukubuyisela kwakhona kubonisa ukuba i-UKX iya kuwela kwinqanaba le-2.0 isandiso seFibonacci okanye inqanaba le-7242.51.
Isalathisi singaphantsi kwe-20% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Isalathiso siwele kummandla othengisiweyo wemarike. Intsingiselo kukuba uxinzelelo lokuthengisa lunokwehla okanye lupheliswe.
I-FTSE 100 (UKX) ihamba phantsi. I-uptrend iye yapheliswa njengoko imarike ifikelela kwi-overbought. Ngokutsho kwesixhobo seFibonacci, isalathisi siya kufikelela kwinqanaba eliphantsi le-7242.
I-FTSE 100 (UKX) iphinda ibuyele kwiNqanaba le-7300, ukuthengisa ngakumbi uxinzelelo olunokwenzeka
I-FTSE 100 (UKX) iyawa emva kokufikelela kwinqanaba le-7320 yokumelana nendawo. Isalathiso sinokuthi sibuyele kwaye sifumane inkxaso ngaphezu kwenqanaba langaphambili lokumelana nenqanaba le-7200. Kwisenzo sexabiso langaphambili, zonke iimbuyiselo zifumene inkxaso ngaphezu kwenqanaba le-7200 ngaphambi kokuqaliswa kokunyuka komgangatho. Okwangoku, ngo-Oktobha 18 uptrend; umzimba wekhandlela ofunyenweyo uvavanye i-78.6% yenqanaba lokubuyisela i-Fibonacci. Ukubuyiswa kubonisa ukuba i-UKX iya kuphakama kodwa iya kuguqulwa kwinqanaba le-1.272 isandiso seFibonacci okanye inqanaba le-7310.53. Ukususela kwisenzo sexabiso, i-UKX ivavanye ulwandiso lweFibonacci okanye inqanaba le-7310.53 kwaye yaphinda yaqala phantsi.
Isalathiso siwele kwinqanaba le-57 ye-Relative Strength Index ixesha 14. Ibonisa ukuba ikwindawo ephakamileyo kunye nangaphezulu kwe-centerline 50. Kwakhona iyakwazi ukunyuka kwi-upside. Ii-SMA zeentsuku ezingama-21 kunye neentsuku ezingama-50 zithambeka phezulu zibonisa ukonyuka. Ixabiso le-crypto lingaphezulu kwee-avareji ezihambayo ezibonisa ukunyuka okunokwenzeka.
Isalathisi singaphezulu kwe-50% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Amabhanti estochastic atyibilika ngokuthe tye ebonisa indlela esecaleni.
I-FTSE 100 (UKX) iphinde yaqala ngokutsha i-uptrend kodwa ijongene nokugatywa kwinqanaba le-7303. I-UKX inokuthi iqalise kwakhona i-uptrend entsha emva kokubuyisela kwinqanaba le-7200.